१५-१६ बर्षसम्म लगातार औषधी खा‍एको भन्दा छिटो काम गर्छ घ्यू कुमारीले, के का लागि फाईदा छ त घ्यू कुमारी ? स्वस्थ्यमूलक जानकारी लिनुहोस – सुदूरखबर डटकम
१५-१६ बर्षसम्म लगातार औषधी खा‍एको भन्दा छिटो काम गर्छ घ्यू कुमारीले, के का लागि फाईदा छ त घ्यू कुमारी ? स्वस्थ्यमूलक जानकारी लिनुहोस
label सुदूर खबर संवाददाता query_builder December, 17 2018
घ्यू कुमारीले गर्छ १६ भन्दा बढी औषधीको काम ! आँखाको रोगमा घ्यू कुमारीको गुदीमा राम्रो बेसार फिटेर मनतातो पारी आखाँमा राती सुत्ने बेलामा बाँध्नाले आँखाको सम्पूर्ण रोग निको हुन्छ । कानको रोगमा घ्यू कुमारीको गुदी मनतातो पारेर २\_३ थोपा दाहिने कान दुखोमा देब्रे कानमा र देब्रे कान दुखेमा दाहिन कानमा हाल्ने र दुबै दुखेमा दुबैमा हाल्नाले ठीक हुन्छ । मस्तिष्कको रोगमा नित्य १ चम्चा घ्यू कुमारी खाने र तालुमा लगाउने गरेमा टाउको पोल्ने, पित्त विकार आदि ठिक हुन्छ र मस्तिष्क ठण्डा हुन्छ । पुरानो ज्वरोमा घ्यू कुमारीको जरा १ चम्चा तातो पानीसँग खानाले जीर्ण ज्वरो पनि निको भएर आउँछ । यसो गर्दा वमन भएमा डराउनु पर्दैन पित्त निस्केर जान्छ । जण्डीस, कमलपित्त भएमा बिहान बेलुका १\_१ चम्चा घ्यू कुमारी सेवन गर्ने गरेमा आँखा, शरीर पहेलो भएको हट्दै जान्छ र निको हुन्छ ।